By administrator on	 July 14, 2020 अन्तरवार्ता, कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, राजनीति, स्थानीय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
डोलराज रानाभाट, गैंडाकोट, ३० असार । कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइहालेमा नवलपुर जिल्लामा शव व्यवस्थापन कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने वारेमा छलफल हुन जरुरी रहेको जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले बताउनुभएको छ । विजय एफएमको कार्यक्रम आजको सवालमा कुराकानी गर्दै समन्वय समिति प्रमुख आलेले गण्डकी प्रदेशकै विभिन्न ठाउँमा शव व्यवस्थापन गर्दा विवादहरु भइरहेको भन्दै समयमै सम्वन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी शव व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भोलि भवितव्य घटना भइहालेमा विवाद रहित व्यवस्थापन गर्नसक्ने वातावरण वनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यसको तयारीमा नवलपुर पनि लागेको उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला तहमा छलफल भइरहेको भन्दै सवैभन्दा पहिला स्थानीय तहले उचित ठाउँको खोजी गरी त्यहाँका स्थानीयसँग छलफल गर्न आलेले सुझाव दिनुभयो । पूर्व तयारी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले स्थानीय तहमा जनसमुदायको वीचमा कुराकानी गरी ठाउँ तोक्नुपर्छ । सम्वन्धित वडा सम्वन्धित क्षेत्र छनौट गरी छलफल गरेर अघि वढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले नै निश्चित ठाउँ भइनसकेको आलेले बताउनुभयो ।
अहिले अस्थायी कोरोना आइसोलेसन अस्पताल संचालन भइरहेको र अक्सिजन सहितको भेन्टिलेटर सहितको सुविधाका लागि काम गर्ने समय आएको बताउनुभयो । अहिले त्यो तहसम्मको विरामी भइहालेमा उपचार गर्न कठीन अवस्था रहेको भन्दै सीसीएमसीको वैठक वसेर अक्सिजन सहितको भेन्टिलेटर सहितको सुविधाका लागि माग गरेको बताउनुभयो ।
चितवन भरतपुरको क्षमताले थेग्न नसक्ने र पोखरा लैजान पनि टाढा पर्ने हुनाले मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा ५ वटा भेन्टिलेटर सहितको सुविधाको माग गरेको समन्वय प्रमुख आलेको भनाई छ । कोरोना अस्थायी अस्पताल रजहरमा पनि त्यसको सुविधा हुनुपर्ने भनी माग गरिएको आलेले बताउनुभयो । प्रदेशका कानुनी मन्त्री हरिवहादुर चुमानले स्थलगत निरीक्षण गरेर सरकारले खर्च उपलब्ध गराउने र थप सुविधा उपलब्ध गराउनेमा पनि सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ । प्रमुख आलेले अस्थायी कोरोना अस्पताल रजहरका चिकित्सक, व्यवस्थापक सहित सवैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गरी समयमै निको पार्न सफल भएको भन्दै आलेले उपचारमा खटिनुभएका सवैमा आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था नवलपुरमै गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेको र सीसीएमसीमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाई छ । तर बजेट धेरै लाग्ने भएकाले अहिले नै निर्णय हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहलाई कोभिड १९ रोक्नका लागि ५ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराएको बताउनुभयो साथै उहाँले अझैपनि असारे विकासको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सीमित स्रोत साधन जनशक्तिका वीच पनि अनुगमन गरिरहेको भन्दै अनुगमनमा देखिएका त्रुटीहरु औंल्याएपछि त्यसको सुधारको कानुन आफूहरुलाई नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । अनुगमन गर्ने प्रतिवेदन दिने काम हामीले गरेका छौँ, आलेले भन्नुभयो,“प्रतिवेदनमा देखिएका खोट समाधानको अधिकार खोइ? प्रतिवेदन दिने राख्ने मात्रै ? अनुगमन पछि नियमन गर्ने कानुन र कार्यविधि वन्नुपर्छ र समन्वयलाई अधिकार दिनुपर्छ । अनुगमन पछिको कार्यान्वयन पक्षको निमित्त कानुन वन्नुपर्छ । ”
असार मसान्त सँगै जिल्लाका विकास निर्माण कार्यहरुको अनुगमन कति भए ? साथै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि समन्व्य समितिले गरेका कार्यहरु केके छन् ?चेसराम आले, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरVijaya FM 101.6 MHzGaindakot-8,Nawalparasi, NepalTel: 078 – 501403/04/06/07Web: http://vijayafm.org.npEmail: info.vijayafm@gmail.com
Posted by 101.6 Vijaya FM on Monday, July 13, 2020